ကူးစက်ဖြစ်ပွားနှုန်းများနေသော ချီကန်ဂန်ညာ (ခေါ်) ဆင်တုပ်ကွေး အကြောင်းသိကောင်းစရာများ – .
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခြင်အမျိုးအစား သုံးမျိုးရှိပြီး Anopheles ခြင်မှတစ်ဆင့် ငှက်ဖျားရောဂါ၊ Aedes ခြင်မှတစ်ဆင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ၊ အဝါရောင်အဖျားရောဂါ၊ ချီကန်ဂန်ညာ (ခေါ်) ဆင်တုပ်ကွေးရောဂါကို ဖြစ်စေသည်။ Culex ခြင် မှတစ်ဆင့် ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ရောဂါနှင့် ဆင်ခြေထောက်ရောဂါကို ဖြစ်စေသည်။ ငှက်ဖျားခြင်၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေးခြင် (ခေါ်) Anopheles နှင့် Aedes ခြင်များသည် ရေကြည်၊ ရေသန့်၊ ရေငြိမ်တွင် ပေါက်ဖွားလေ့ရှိပြီး Culex ခြင်များသည် ရေပုပ်ရေသိုး (အုတ်မြောင်း၊ မိလ္လာကန်၊ မိလ္လာကျင်း၊ အသုံးမပြုနိုင်သည့် အိုးခွက်တွေ၊ မြေတွင်း၊ မြေချိုင့်များနှင့် အသုံးမပြုသည့်ရေတွင်း၊ ရေကန်များတွင် ပေါက်ဖွားခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခြင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ဖြစ်ပွားသည့် ရောဂါအများစု ဖြစ်ပွားမှုရှိနေပြီး ငှက်ဖျားရောဂါ၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ၊ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ၊ ဆင်တုပ်ကွေး ရောဂါများသည် နှစ်စဉ်ဖြစ်ပွားမှု ရှိနေပြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ပြဿနာထဲတွင် ပါဝင်နေဆဲဖြစ်သည်။
ချီကန်ဂန်ညာ (ခေါ်) ဆင်တုပ်ကွေး
Chikungunya (ချီကန်ဂန်ညာ/ဆင်တုပ်ကွေး) ရောဂါသည် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားပြီး ခြင်ကျား အကိုက်ခံရရာမှတစ်ဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အာရှ၊ အာဖရိက၊ ဥရောပနှင့် အမေရိကတိုက်တို့ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၆၀ ကျော်တွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။ အာရှတိုက်၊ အာဖရိကတိုက်နှင့် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်တို့တွင် ဖြစ်ပွားမှု အများဆုံးဖြစ်ပြီး ခြင်ကျားပေါက်ပွားမှုများသော နေရာများတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားရန် အခွင့်အလမ်း ပိုများကြောင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များအရ သိရသည်။
“ချီကန်ဂန်ညာ (ခေါ်) ဆင်တုပ်ကွေးက ခြင်ကတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ လူအချင်းချင်း တိုက်ရိုက်ကူးစက်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ရောဂါပိုး သယ်ဆောင်ထားတဲ့ ခြင်ကတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါမျိုးပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေက သွေးလွန်တုပ်ကွေးနဲ့ ဆင်တဲ့အတွက် တချို့က သွေးလွန်တုပ်ကွေးနဲ့ မှားတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ Aedes ခြင်ကျားဟာ ရေကြည်ရေသန့်၊ ရေသေမှာ ပေါက်လေ့ရှိပြီး လူတွေအသုံးပြုဖို့ ရေသိုလှောင်လေ့ရှိတဲ့ နေရာတွေနဲ့ လူတွေစွန့်ပစ်ထားတဲ့ ရေတင်ကျန်နိုင်တဲ့ အရာဝတ္ထုတွေမှာ ပေါက်ဖွားလေ့ ရှိပါတယ်။ Aedes albopictus ကတော့ သဘာဝအလျောက် မိုးရေတင်ကျန်လေ့ရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ ပေါက်လေ့ရှိပြီး ခြင်ဥကနေ ခြင်ကောင်ဖြစ်တဲ့အထိ ခုနစ်ရက်ကနေ ၁၀ ရက်ကြာလေ့ ရှိပါတယ်” ဟု ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန၊ ခြင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ချီကန်ဂန်ညာ/ဆင်တုပ်ကွေး၏ ရောဂါလက္ခဏာများမှာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကိုယ်အပူချိန်တက်ခြင်း၊ အရေပြားပေါ်တွင် အနီစက်များထွက်ခြင်း၊ ကြွက်သားများ နာကျင်ခြင်း၊ အဆစ်အမြစ်များ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အဆစ်အမြစ်များ ကိုက်ခဲခြင်းနှင့် မောပန်းအားနည်းခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
ရောဂါပိုး သယ်ဆောင်သည့် ခြင်ကျား (Aedes aegypti/ Aedes albopictus) အကိုက်ခံရပြီးနောက် သုံးရက်မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း ရောဂါလက္ခဏာများ စတင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ဖြစ်ခေါင့်ဖြစ်ခဲ အနေဖြင့် မျက်စိ၊ အာရုံကြော၊ နှလုံးတို့နှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါလက္ခဏာများလည်း ခံစားရတတ်သည် ဟုဆိုသည်။
“ဆင်တုပ်ကွေးရဲ့ လက္ခဏာက ဖျားတယ်။ အပူချိန်၁၀၃ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ ၁၀၄ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် အထိရှိမယ်။ ကိုယ်လက်တွေ ကိုက်ခဲနာကျင်မယ်။ အနီစက်တွေ ထွက်လာမယ်။ တချို့ဆို အရိုက်ခံထားရသလို အရမ်းကိုက်ခဲမယ်။ ခေါင်းတွေကိုက်တယ်။ ဆင်တုပ်ကွေးဖြစ်ပြီး ကိုက်ခဲမှုတွေက အဖျားပျောက်သွားပေမယ့် ကျန်ခဲ့တယ်။ တချို့ဆို လပိုင်းလောက်အထိ ခံရတာတွေရှိတယ်။ ဆင်တုပ်ကွေးက ကာကွယ်ဆေးကလည်း မရှိသေးပါဘူး။ ရောဂါကုသရတဲ့ ဆေးဝါးကလည်း လက္ခဏာတွေ ပျောက်အောင်လို့ ဒီရောဂါ လက္ခဏာအတွက် သက်သာအောင်ကုတဲ့ဆေးပဲ ရှိပါသေးတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်းမှ ဒေါက်တာစည်သူက ပြောကြားသည်။
ချီကန်ဂန်ညာ/ဆင်တုပ်ကွေး ရောဂါ၏ လက္ခဏာများသည် အခြားခြင်ကျား အကိုက်ခံရရာမှတစ်ဆင့် ကူးစက်သည့် ရောဂါများဖြစ်သော သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါနှင့် ဇီကာရောဂါ လက္ခဏာများနှင့် ဆင်တူ၍ မှားယွင်းနိုင်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်းမှ ဒေါက်တာစည်သူက ဆိုသည်။
ရောဂါဖြစ်ပွားသူ အများစုတွင် ရောဂါပြင်းထန်လေ့မရှိဘဲ ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်ခန့်အတွင်း ရောဂါလက္ခဏာအားလုံး သက်သာပျောက်ကင်း ကြသော်လည်း အချို့တွင် အဆစ်အမြစ်များ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကို လနှင့်ချီ၍ ခံစားရနိုင်သည်။ အသက်အရွယ်ကြီးသူများ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါနှင့် နှလုံးရောဂါ အစရှိသည့် နာတာရှည်ရောဂါအခံ ရှိသူများတွင် ရောဂါပြင်းထန်နိုင်သည်ဟု ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ခြင်ကျားသည် အများအားဖြင့် နေ့အချိန်၌ ကိုက်လေ့ရှိပြီး အများဆုံးကိုက်လေ့ရှိတဲ့ အချိန်များမှာ နံနက်အရုဏ်တက်စမှ နေထွက်ချိန်အထိ တစ်ချိန်နှင့် ညနေ နေမဝင်မီ အချိန်တို့ဖြစ်ပြီး ခြင်ကျားသည် အနောဖလိစ်ခြင်ကဲ့သို့ ဝေးဝေးပျံလေ့မရှိပါ။ ၎င်းတို့ပေါက်ဖွားရာ နေရာမှ မီတာ ၅၀ မှ ၃၀၀ အတွင်းသာ ပျံလေ့ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခြင်အမျိုးအစားပေါင်း ၃၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး လူပေါင်း နှစ်သန်းခန့်သည် ခြင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်သော ရောဂါများကို ခံစားနေရသည်ဟု ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ဆိုထားသည်။ ခြင်မှတစ်ဆင့် ငှက်ဖျားရောဂါ၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ၊ ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ၊ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ၊ အဝါရောင် အဖျားရောဂါ၊ ဆင်တုပ်ကွေးရောဂါတို့ ဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး ယင်းရောဂါများသည် ကူးစက်ဖြစ်ပွားနှုန်းများသည့် ရောဂါများဖြစ်သည်။
“တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် အားလုံးမှာ ရန်ကုန်က လူဦးရေထူထပ်တယ်။ လူနေသိပ်သည်းတယ်။ ရေသိုလှောင်မှု များတယ်။ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား များတယ်။ ခြင်ပေါက်ပွားမှုလည်း များပါတယ်။ မိုးတွေဆက်တိုက်ရွာရင် ခြင်က သိပ်မထွက်ဘူး။ မိုးရွာလိုက် နေပူလိုက်ဆိုရင် ခြင်ပေါက်ပွားမှုများတယ်။ ဆင်တုပ်ကွေးက အဓိက ခြင်ကတစ်ဆင့် ကူးတာဆိုတော့ ရိုးရိုးလေးတွေးရင် ခြင်မကိုက်အောင်နေရင် ရောဂါမကူးဘူးပေါ့။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးတို့ ဇီကာတို့လိုပဲ ခြင်မကိုက်အောင်နေခြင်းက အကောင်းဆုံး ကာကွယ်နည်းပါပဲ” ဟု ဒေါက်တာစည်သူက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ကျန်းမာရေးဌာနက လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ခြင်နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းများ
“သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ အပါအဝင် ခြင်ကတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတွေအတွက် ဒီနှစ်အခြေခံပညာ ကျောင်းတွေမှာ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ အသိပညာပေး လုပ်ငန်းတွေကို အဓိကထားပြီး လုပ်နေပါတယ်။ ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းတွေကို ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး အားလုံးမှာရှိတဲ့ အခြေခံပညာ ကျောင်းတွေမှာ စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ဖို့ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနက ညွှန်ကြားထားတာ ရှိပါတယ်” ဟု ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန၊ ခြင်မှတစ်ဆင့်ကူး စက်တတ်သော ရောဂါများ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ချီကန်ဂန်ညာ/ဆင်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားသည်ဟု သံသယရှိပါက ဆေးရုံဆေးခန်းနှင့် ကျန်းမာရေး ဌာနများတွင် စနစ်တကျ စမ်းသပ်စစ်ဆေး၍ ကုသမှုခံယူရန် လိုအပ်သည်။ ချီကန်ဂန်ညာ/ဆင်တုပ်ကွေး၏ ရောဂါလက္ခဏာများ သက်သာစေရန် အတွက်သာ ကုသမှုပေးနိုင်ပြီး သီးသန့်ကုထုံး မရှိသေးဘဲ ဆင်တုပ်ကွေး၏ ရောဂါလက္ခဏာများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားမှု များပြားလေ့ရှိရာ ရောဂါပြင်းထန်စွာ ခံစားရနိုင်သည့် သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါနှင့် ဆင်တူသဖြင့် ဂရုပြုရန် လိုအပ်သည်ဟု ကျန်းမာရေး ပညာရှင်များက ဆိုသည်။
ရောဂါအတွက် ကာကွယ်ဆေး မရှိသော်လည်း နေအိမ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ခြင်နှင့် ခြင်လောက်လမ်း နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းများကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် မိမိနှင့် မိမိ မိသားစုတွင် ဆင်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်နိုင်သည်။
ဆင်တုပ်ကွေးရောဂါ အပါအဝင် သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားနှုန်းများသော ရောဂါကာ ကွယ်နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် ကျန်းမာရေးဌာနများ အနေဖြင့် တွေ့ကြုံနေရသော အားနည်းချက်များမှာ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးများနှင့် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံဆေးခန်းများမှ သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်မီ ရရှိနိုင်ရေးကိုလည်း ပိုမိုအလေးထား လုပ်ဆောင်ပါမှ ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
လက်ရှိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် တွေ့ရှိနေရသော အဟန့်အတားများမှာ လူဦးရေ များပြားထူထပ်ခြင်း၊ မြို့ပြလူနေမှုစနစ် ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိခြင်းတို့သည်လည်း ရောဂါကူးစက် ပြန့်ပွားရခြင်း အကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီး ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများ ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ လူအများစုမှာ သောက်ရေ သုံးရေကို စနစ်တကျ သိုလှောင်နိုင်မှု မရှိခြင်းကြောင့် ခြင်ကျားများ ပေါက်ပွားပြီး ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှု အားနည်းချက်များ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် ပြည်သူလူထုနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ၏ လွဲမှားနေသော အယူအဆများလည်း ရှိနေသည်။ ဥပမာ- ခြင်ကျားလောက်လမ်း နှိမ်နင်းရေး ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့်အစား ခြင်ဆေးဖျန်းခြင်းကိုသာ ဆောင်ရွက်လိုကြသည် ဟုဆိုသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ်အများစုရှိ ကွန်ဒိုများ အပါအဝင် အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များသည် ခြင်မပေါက်ပွားစေရန် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသေးပေ။
“ခြင်မရှိအောင်လုပ်ဖို့က လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ခြင်မပေါက်ပွားနိုင်အောင် လူတိုင်းလူတိုင်း အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းက လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့် တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ ခြင်ပေါက်ပွားမှု မရှိအောင် ပိုးလောက်လမ်း နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းတွေကို ရောဂါကူးစက်မှု များပြားတဲ့ကာလ မတိုင်မီနဲ့ ကပ်ရောဂါအသွင် ဖြစ်ပွားနေချိန် အတွင်းမှာ ပိုမိုအားစိုက် လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ခြင်နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာလျှင် ခြင်ကတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါအမျိုးမျိုးကို ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖုံး၊ သွန်၊ လဲ၊ စစ်စတဲ့ ပိုးလောက်လမ်း နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းတွေကို လူတိုင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်းမှ ဒေါက်တာစည်သူက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
ရောဂါကာကွယ် နှိမ်နင်းရေးအတွက် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်ရှိ ရေထည့်ထားသည့် ရေစည်ရေအိုးများနှင့် ရေတင်ကျန်နိုင်သော ကားတာယာများကို ခြင်မဝင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားရမည်။ သောက်ရေ၊ သုံးရေ၊ အိုးခွက်များ၊ ရေစည်ရေအိုးများ၊ ပန်းအိုး၊ နတ်အိုးများ၏ အတွင်းပိုင်းကို ပွတ်တိုက် ဆေးကြော၍ သွန်ပစ်ခြင်း၊ ရေရှားပါက ခြင်လောက်လမ်းတွေ့သောရေကို နောက်အိုးတစ်အိုးသို့ ရေစစ်၍ လဲလှယ်ပြောင်းထည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အိမ်ပြင်ပရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ရှင်းလင်းခြင်း၊ မြေမြှုပ်ခြင်း၊ အသုံးမပြုသော အိုးခွက်များ မှောက်ထားခြင်း။ ခြင်ကိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အင်္ကျီလက်ရှည်၊ ဘောင်းဘီရှည် ဝတ်ခြင်း၊ ရေမလှယ်နိုင်သည့် အုတ်ကန်၊ ရေစည်၊ ရေကန်များတွင် ခြင်လောက်လမ်းစား ငါးထည့်ရန် သို့မဟုတ် ခြင်လောက်လမ်းသတ်ဆေး Abate ခတ်ရန် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနက အသိပေး နှိုးဆော်ထားသည်။
ကူးစကျဖွဈပှားနှုနျးမြားနသေော ခြီကနျဂနျညာ (ချေါ) ဆငျတုပျကှေး အကွောငျးသိကောငျးစရာမြား
မွနျမာနိုငျငံတှငျ ခွငျအမြိုးအစား သုံးမြိုးရှိပွီး Anopheles ခွငျမှတဈဆငျ့ ငှကျဖြားရောဂါ၊ Aedes ခွငျမှတဈဆငျ့ သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါ၊ အဝါရောငျအဖြားရောဂါ၊ ခြီကနျဂနျညာ (ချေါ) ဆငျတုပျကှေးရောဂါကို ဖွဈစသေညျ။ Culex ခွငျ မှတဈဆငျ့ ဂပြနျဦးနှောကျရောငျ ရောဂါနှငျ့ ဆငျခွထေောကျရောဂါကို ဖွဈစသေညျ။ ငှကျဖြားခွငျ၊ သှေးလှနျတုပျကှေးခွငျ (ချေါ) Anopheles နှငျ့ Aedes ခွငျမြားသညျ ရကွေညျ၊ ရသေနျ့၊ ရငွေိမျတှငျ ပေါကျဖှားလရှေိ့ပွီး Culex ခွငျမြားသညျ ရပေုပျရသေိုး (အုတျမွောငျး၊ မိလ်လာကနျ၊ မိလ်လာကငျြး၊ အသုံးမပွုနိုငျသညျ့ အိုးခှကျတှေ၊ မွတှေငျး၊ မွခြေိုငျ့မြားနှငျ့ အသုံးမပွုသညျ့ရတှေငျး၊ ရကေနျမြားတှငျ ပေါကျဖှားခွငျးဖွဈသညျ။ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ခွငျမှတဈဆငျ့ ကူးစကျဖွဈပှားသညျ့ ရောဂါအမြားစု ဖွဈပှားမှုရှိနပွေီး ငှကျဖြားရောဂါ၊ သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါ၊ ဂပြနျဦးနှောကျရောငျရောဂါ၊ ဆငျတုပျကှေး ရောဂါမြားသညျ နှဈစဉျဖွဈပှားမှု ရှိနပွေီး ပွညျသူ့ကနျြးမာရေး ပွဿနာထဲတှငျ ပါဝငျနဆေဲဖွဈသညျ။
ခြီကနျဂနျညာ (ချေါ) ဆငျတုပျကှေး
Chikungunya (ခြီကနျဂနျညာ/ဆငျတုပျကှေး) ရောဂါသညျ ဗိုငျးရပျဈပိုးကွောငျ့ ဖွဈပှားပွီး ခွငျကြား အကိုကျခံရရာမှတဈဆငျ့ ကူးစကျသော ရောဂါတဈမြိုးဖွဈသညျ။ အာရှ၊ အာဖရိက၊ ဥရောပနှငျ့ အမရေိကတိုကျတို့ရှိ နိုငျငံပေါငျး ၆၀ ကြျောတှငျ ဖွဈပှားလကျြရှိသညျ။ အာရှတိုကျ၊ အာဖရိကတိုကျနှငျ့ အိန်ဒိယတိုကျငယျတို့တှငျ ဖွဈပှားမှု အမြားဆုံးဖွဈပွီး ခွငျကြားပေါကျပှားမှုမြားသော နရောမြားတှငျ ရောဂါဖွဈပှားရနျ အခှငျ့အလမျး ပိုမြားကွောငျး ပွညျသူ့ကနျြးမာရေး ဦးစီးဌာနက ထုတျပွနျသော အခကျြအလကျမြားအရ သိရသညျ။
“ခြီကနျဂနျညာ (ချေါ) ဆငျတုပျကှေးက ခွငျကတဈဆငျ့ ကူးစကျတဲ့ရောဂါ ဖွဈပါတယျ။ လူအခငျြးခငျြး တိုကျရိုကျကူးစကျတာမြိုး မဟုတျပါဘူး။ ရောဂါပိုး သယျဆောငျထားတဲ့ ခွငျကတဈဆငျ့ ကူးစကျတဲ့ ရောဂါမြိုးပါ။ ဗိုငျးရပျဈပိုးကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ရောဂါလက်ခဏာတှကေ သှေးလှနျတုပျကှေးနဲ့ ဆငျတဲ့အတှကျ တခြို့က သှေးလှနျတုပျကှေးနဲ့ မှားတာမြိုးတှေ ရှိပါတယျ။ Aedes ခွငျကြားဟာ ရကွေညျရသေနျ့၊ ရသေမှော ပေါကျလရှေိ့ပွီး လူတှအေသုံးပွုဖို့ ရသေိုလှောငျလရှေိ့တဲ့ နရောတှနေဲ့ လူတှစှေနျ့ပဈထားတဲ့ ရတေငျကနျြနိုငျတဲ့ အရာဝတ်ထုတှမှော ပေါကျဖှားလေ့ ရှိပါတယျ။ Aedes albopictus ကတော့ သဘာဝအလြောကျ မိုးရတေငျကနျြလရှေိ့တဲ့ နရောတှမှော ပေါကျလရှေိ့ပွီး ခွငျဥကနေ ခွငျကောငျဖွဈတဲ့အထိ ခုနဈရကျကနေ ၁၀ ရကျကွာလေ့ ရှိပါတယျ” ဟု ပွညျသူ့ကနျြးမာရေး ဦးစီးဌာန၊ ခွငျမှတဈဆငျ့ ကူးစကျတတျသော ရောဂါမြား ကာကှယျနှိမျနငျးရေးအဖှဲ့မှ တာဝနျရှိသူတဈဦးက ပွောကွားသညျ။
ခြီကနျဂနျညာ/ဆငျတုပျကှေး၏ ရောဂါလက်ခဏာမြားမှာ ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ ကိုယျအပူခြိနျတကျခွငျး၊ အရပွေားပျေါတှငျ အနီစကျမြားထှကျခွငျး၊ ကွှကျသားမြား နာကငျြခွငျး၊ အဆဈအမွဈမြား ရောငျရမျးခွငျး၊ အဆဈအမွဈမြား ကိုကျခဲခွငျးနှငျ့ မောပနျးအားနညျးခွငျး တို့ဖွဈသညျ။
ရောဂါပိုး သယျဆောငျသညျ့ ခွငျကြား (Aedes aegypti/ Aedes albopictus) အကိုကျခံရပွီးနောကျ သုံးရကျမှ ခုနဈရကျအတှငျး ရောဂါလက်ခဏာမြား စတငျဖွဈပှားလရှေိ့သညျ။ ဖွဈခေါငျ့ဖွဈခဲ အနဖွေငျ့ မကျြစိ၊ အာရုံကွော၊ နှလုံးတို့နှငျ့ ပတျသကျသော ရောဂါလက်ခဏာမြားလညျး ခံစားရတတျသညျ ဟုဆိုသညျ။
“ဆငျတုပျကှေးရဲ့ လက်ခဏာက ဖြားတယျ။ အပူခြိနျ၁၀၃ ဒီဂရီဖာရငျဟိုကျ၊ ၁၀၄ ဒီဂရီ ဖာရငျဟိုကျ အထိရှိမယျ။ ကိုယျလကျတှေ ကိုကျခဲနာကငျြမယျ။ အနီစကျတှေ ထှကျလာမယျ။ တခြို့ဆို အရိုကျခံထားရသလို အရမျးကိုကျခဲမယျ။ ခေါငျးတှကေိုကျတယျ။ ဆငျတုပျကှေးဖွဈပွီး ကိုကျခဲမှုတှကေ အဖြားပြောကျသှားပမေယျ့ ကနျြခဲ့တယျ။ တခြို့ဆို လပိုငျးလောကျအထိ ခံရတာတှရှေိတယျ။ ဆငျတုပျကှေးက ကာကှယျဆေးကလညျး မရှိသေးပါဘူး။ ရောဂါကုသရတဲ့ ဆေးဝါးကလညျး လက်ခဏာတှေ ပြောကျအောငျလို့ ဒီရောဂါ လက်ခဏာအတှကျ သကျသာအောငျကုတဲ့ဆေးပဲ ရှိပါသေးတယျ” ဟု မွနျမာနိုငျငံ ဆရာဝနျအသငျးမှ ဒေါကျတာစညျသူက ပွောကွားသညျ။
ခြီကနျဂနျညာ/ဆငျတုပျကှေး ရောဂါ၏ လက်ခဏာမြားသညျ အခွားခွငျကြား အကိုကျခံရရာမှတဈဆငျ့ ကူးစကျသညျ့ ရောဂါမြားဖွဈသော သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါနှငျ့ ဇီကာရောဂါ လက်ခဏာမြားနှငျ့ ဆငျတူ၍ မှားယှငျးနိုငျသညျဟု မွနျမာနိုငျငံ ဆရာဝနျအသငျးမှ ဒေါကျတာစညျသူက ဆိုသညျ။
ရောဂါဖွဈပှားသူ အမြားစုတှငျ ရောဂါပွငျးထနျလမေ့ရှိဘဲ ရကျသတ်တပတျ တဈပတျခနျ့အတှငျး ရောဂါလက်ခဏာအားလုံး သကျသာပြောကျကငျး ကွသျောလညျး အခြို့တှငျ အဆဈအမွဈမြား နာကငျြကိုကျခဲခွငျးကို လနှငျ့ခြီ၍ ခံစားရနိုငျသညျ။ အသကျအရှယျကွီးသူမြား၊ သှေးတိုးရောဂါ၊ ဆီးခြိုရောဂါနှငျ့ နှလုံးရောဂါ အစရှိသညျ့ နာတာရှညျရောဂါအခံ ရှိသူမြားတှငျ ရောဂါပွငျးထနျနိုငျသညျဟု ပွညျသူ့ကနျြးမာရေး ဦးစီးဌာနမှ သိရသညျ။
ခွငျကြားသညျ အမြားအားဖွငျ့ နအေ့ခြိနျ၌ ကိုကျလရှေိ့ပွီး အမြားဆုံးကိုကျလရှေိ့တဲ့ အခြိနျမြားမှာ နံနကျအရုဏျတကျစမှ နထှေကျခြိနျအထိ တဈခြိနျနှငျ့ ညနေ နမေဝငျမီ အခြိနျတို့ဖွဈပွီး ခွငျကြားသညျ အနောဖလိဈခွငျကဲ့သို့ ဝေးဝေးပြံလမေ့ရှိပါ။ ၎င်းငျးတို့ပေါကျဖှားရာ နရောမှ မီတာ ၅၀ မှ ၃၀၀ အတှငျးသာ ပြံလရှေိ့သညျဟု သိရသညျ။
ကမ်ဘာပျေါတှငျ ခွငျအမြိုးအစားပေါငျး ၃၀၀၀ ခနျ့ရှိပွီး လူပေါငျး နှဈသနျးခနျ့သညျ ခွငျမှတဈဆငျ့ကူးစကျသော ရောဂါမြားကို ခံစားနရေသညျဟု ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့က ဆိုထားသညျ။ ခွငျမှတဈဆငျ့ ငှကျဖြားရောဂါ၊ သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါ၊ ဆငျခွထေောကျရောဂါ၊ ဂပြနျဦးနှောကျရောငျရောဂါ၊ အဝါရောငျ အဖြားရောဂါ၊ ဆငျတုပျကှေးရောဂါတို့ ဖွဈပှားနိုငျပွီး ယငျးရောဂါမြားသညျ ကူးစကျဖွဈပှားနှုနျးမြားသညျ့ ရောဂါမြားဖွဈသညျ။
“တိုငျးနဲ့ပွညျနယျ အားလုံးမှာ ရနျကုနျက လူဦးရထေူထပျတယျ။ လူနသေိပျသညျးတယျ။ ရသေိုလှောငျမှု မြားတယျ။ ရှပွေ့ောငျးလုပျသား မြားတယျ။ ခွငျပေါကျပှားမှုလညျး မြားပါတယျ။ မိုးတှဆေကျတိုကျရှာရငျ ခွငျက သိပျမထှကျဘူး။ မိုးရှာလိုကျ နပေူလိုကျဆိုရငျ ခွငျပေါကျပှားမှုမြားတယျ။ ဆငျတုပျကှေးက အဓိက ခွငျကတဈဆငျ့ ကူးတာဆိုတော့ ရိုးရိုးလေးတှေးရငျ ခွငျမကိုကျအောငျနရေငျ ရောဂါမကူးဘူးပေါ့။ သှေးလှနျတုပျကှေးတို့ ဇီကာတို့လိုပဲ ခွငျမကိုကျအောငျနခွေငျးက အကောငျးဆုံး ကာကှယျနညျးပါပဲ” ဟု ဒေါကျတာစညျသူက ဆကျလကျပွောကွားသညျ။
ကနျြးမာရေးဌာနက လုပျဆောငျခဲ့သော ခွငျနှိမျနငျးရေး လုပျငနျးမြား
“သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါ အပါအဝငျ ခွငျကတဈဆငျ့ ကူးစကျတဲ့ ရောဂါတှအေတှကျ ဒီနှဈအခွခေံပညာ ကြောငျးတှမှော ကွိုတငျကာကှယျရေးနဲ့ အသိပညာပေး လုပျငနျးတှကေို အဓိကထားပွီး လုပျနပေါတယျ။ ရောဂါကာကှယျနှိမျနငျးရေး လုပျငနျးတှကေို ပွညျနယျနဲ့ တိုငျးဒသေကွီး အားလုံးမှာရှိတဲ့ အခွခေံပညာ ကြောငျးတှမှော စနဈတကြ လုပျဆောငျဖို့ တိုငျးဒသေကွီး ပွညျသူ့ကနျြးမာရေး ဦးစီးဌာနက ညှနျကွားထားတာ ရှိပါတယျ” ဟု ပွညျသူ့ကနျြးမာရေး ဦးစီးဌာန၊ ခွငျမှတဈဆငျ့ကူး စကျတတျသော ရောဂါမြား ကာကှယျနှိမျနငျးရေး အဖှဲ့မှ တာဝနျရှိသူတဈဦးက ပွောကွားသညျ။
ခြီကနျဂနျညာ/ဆငျတုပျကှေးရောဂါ ဖွဈပှားသညျဟု သံသယရှိပါက ဆေးရုံဆေးခနျးနှငျ့ ကနျြးမာရေး ဌာနမြားတှငျ စနဈတကြ စမျးသပျစဈဆေး၍ ကုသမှုခံယူရနျ လိုအပျသညျ။ ခြီကနျဂနျညာ/ဆငျတုပျကှေး၏ ရောဂါလက်ခဏာမြား သကျသာစရေနျ အတှကျသာ ကုသမှုပေးနိုငျပွီး သီးသနျ့ကုထုံး မရှိသေးဘဲ ဆငျတုပျကှေး၏ ရောဂါလက်ခဏာမြားသညျ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ဖွဈပှားမှု မြားပွားလရှေိ့ရာ ရောဂါပွငျးထနျစှာ ခံစားရနိုငျသညျ့ သှေးလှနျတုပျကှေး ရောဂါနှငျ့ ဆငျတူသဖွငျ့ ဂရုပွုရနျ လိုအပျသညျဟု ကနျြးမာရေး ပညာရှငျမြားက ဆိုသညျ။
ရောဂါအတှကျ ကာကှယျဆေး မရှိသျောလညျး နအေိမျနှငျ့ ပတျဝနျးကငျြတှငျ ခွငျနှငျ့ ခွငျလောကျလမျး နှိမျနငျးရေး လုပျငနျးမြားကို မိမိတို့ကိုယျတိုငျ ပါဝငျခွငျးဖွငျ့ မိမိနှငျ့ မိမိ မိသားစုတှငျ ဆငျတုပျကှေးရောဂါ ဖွဈပှားမှုကို ကာကှယျနိုငျသညျ။
ဆငျတုပျကှေးရောဂါ အပါအဝငျ သှေးလှနျတုပျကှေး ရောဂါကဲ့သို့ ဖွဈပှားနှုနျးမြားသော ရောဂါကာ ကှယျနှိမျနငျးရေး လုပျငနျးမြား လုပျကိုငျရာတှငျ ကနျြးမာရေးဌာနမြား အနဖွေငျ့ တှကွေုံ့နရေသော အားနညျးခကျြမြားမှာ ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးမြားနှငျ့ ပုဂ်ဂလိက ဆေးရုံဆေးခနျးမြားမှ သတငျးအခကျြအလကျမြားကို အခြိနျမီ ရရှိနိုငျရေးကိုလညျး ပိုမိုအလေးထား လုပျဆောငျပါမှ ရောဂါကာကှယျနှိမျနငျးရေးကို မွနျမွနျဆနျဆနျ ထိထိရောကျရောကျ ဆောငျရှကျနိုငျမညျ ဖွဈသညျဟု ဆိုသညျ။
လကျရှိ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးတှငျ ရောဂါကာကှယျနှိမျနငျးရေး လုပျငနျးမြား လုပျကိုငျရာတှငျ တှရှေိ့နရေသော အဟနျ့အတားမြားမှာ လူဦးရေ မြားပွားထူထပျခွငျး၊ မွို့ပွလူနမှေုစနဈ ကောငျးစှာဖှံ့ဖွိုးမှု မရှိခွငျးတို့သညျလညျး ရောဂါကူးစကျ ပွနျ့ပှားရခွငျး အကွောငျးရငျးဖွဈပွီး ကာကှယျနှိမျနငျးရေး ဆောငျရှကျရာတှငျ ကွုံတှနေ့ရေသော အခကျအခဲမြား ဖွဈသညျဟု သိရသညျ။ လူအမြားစုမှာ သောကျရေ သုံးရကေို စနဈတကြ သိုလှောငျနိုငျမှု မရှိခွငျးကွောငျ့ ခွငျကြားမြား ပေါကျပှားပွီး ရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျမှု အားနညျးခကျြမြား ရှိနဆေဲ ဖွဈသညျဟု ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြားက ဆိုသညျ။
ထို့ပွငျ ပွညျသူလူထုနှငျ့ ဒသေဆိုငျရာ အာဏာပိုငျမြား၏ လှဲမှားနသေော အယူအဆမြားလညျး ရှိနသေညျ။ ဥပမာ- ခွငျကြားလောကျလမျး နှိမျနငျးရေး ဦးစားပေး ဆောငျရှကျရမညျ့အစား ခွငျဆေးဖနျြးခွငျးကိုသာ ဆောငျရှကျလိုကွသညျ ဟုဆိုသညျ။ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျး မွို့နယျအမြားစုရှိ ကှနျဒိုမြား အပါအဝငျ အထပျမွငျ့ အဆောကျအအုံ တညျဆောကျရေး လုပျငနျးခှငျမြားသညျ ခွငျမပေါကျပှားစရေနျ လိုကျနာရမညျ့ စညျးကမျးမြားကို လိုကျနာဆောငျရှကျခွငျး မရှိသေးပေ။
“ခွငျမရှိအောငျလုပျဖို့က လူတိုငျးမှာ တာဝနျရှိပါတယျ။ ခွငျမပေါကျပှားနိုငျအောငျ လူတိုငျးလူတိုငျး အိမျတိုငျးအိမျတိုငျးက လုပျကိုလုပျရမယျ့ တာဝနျဖွဈပါတယျ။ ခွငျပေါကျပှားမှု မရှိအောငျ ပိုးလောကျလမျး နှိမျနငျးရေး လုပျငနျးတှကေို ရောဂါကူးစကျမှု မြားပွားတဲ့ကာလ မတိုငျမီနဲ့ ကပျရောဂါအသှငျ ဖွဈပှားနခြေိနျ အတှငျးမှာ ပိုမိုအားစိုကျ လုပျဆောငျဖို့ လိုပါတယျ။ ခွငျနှိမျနငျးရေး လုပျငနျးတှကေို ထိထိရောကျရောကျ ဆောငျရှကျနိုငျမှသာလြှငျ ခွငျကတဈဆငျ့ ကူးစကျတဲ့ ရောဂါအမြိုးမြိုးကို ကာကှယျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဖုံး၊ သှနျ၊ လဲ၊ စဈစတဲ့ ပိုးလောကျလမျး နှိမျနငျးရေး လုပျငနျးတှကေို လူတိုငျးပါဝငျ လုပျဆောငျဖို့ တိုကျတှနျးလိုပါတယျ” ဟု မွနျမာနိုငျငံ ဆရာဝနျအသငျးမှ ဒေါကျတာစညျသူက သုံးသပျပွောကွားသညျ။
ရောဂါကာကှယျ နှိမျနငျးရေးအတှကျ ပွညျသူလူထုအနဖွေငျ့ မိမိတို့ အိမျတှငျးအိမျပွငျရှိ ရထေညျ့ထားသညျ့ ရစေညျရအေိုးမြားနှငျ့ ရတေငျကနျြနိုငျသော ကားတာယာမြားကို ခွငျမဝငျစရေနျ ဖုံးအုပျထားရမညျ။ သောကျရေ၊ သုံးရေ၊ အိုးခှကျမြား၊ ရစေညျရအေိုးမြား၊ ပနျးအိုး၊ နတျအိုးမြား၏ အတှငျးပိုငျးကို ပှတျတိုကျ ဆေးကွော၍ သှနျပဈခွငျး၊ ရရှေားပါက ခွငျလောကျလမျးတှသေ့ောရကေို နောကျအိုးတဈအိုးသို့ ရစေဈ၍ လဲလှယျပွောငျးထညျ့ခွငျးမြား ပွုလုပျခွငျး၊ အိမျပွငျပရှိ စှနျ့ပဈပစ်စညျးမြား ရှငျးလငျးခွငျး၊ မွမွှေုပျခွငျး၊ အသုံးမပွုသော အိုးခှကျမြား မှောကျထားခွငျး။ ခွငျကိုကျခွငျးမှ ကာကှယျရနျ အကငြ်္ီလကျရှညျ၊ ဘောငျးဘီရှညျ ဝတျခွငျး၊ ရမေလှယျနိုငျသညျ့ အုတျကနျ၊ ရစေညျ၊ ရကေနျမြားတှငျ ခွငျလောကျလမျးစား ငါးထညျ့ရနျ သို့မဟုတျ ခွငျလောကျလမျးသတျဆေး Abate ခတျရနျ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေး ဦးစီးဌာနက အသိပေး နှိုးဆျောထားသညျ။
ရဟန်းအပါး ၂ သိန်းကျော် မြှုပ်နှံထားတဲ့ ရှေးဟောင်းသင်္ချိုင်းကြီး ဒီသင်္ချိုင်းကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ရဲ့တောင်ပိုင်းက ဝါကာယမစီရင်စုထဲမှာ တည်ရှိတဲ့ အိုကူနိုအင် (Okunoin) သင်္ချိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Koya မြို့အနီး တောင်ပေါ်က တောအုပ်ထဲမှာ ရှိနေပြီး ဒီနေရာမှာ ဘုရားကျောင်းတွေအဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူကတော့ ရှင်ဂွန်ဗုဒ္ဓဘာသာ တည်ထောင်သူ ဘုန်းတော်ကြီး ကိုဗိုဒါရှီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီး ကိုဗိုဒါရှီဟာ Koyasan နယ်မြေကို ရှင်ဂွန်းဗုဒ္ဓဘာသာ စတင်ခဲ့ရာနေရာအဖြစ် အေဒီ ၈၁၆ခုနှစ်ကတည်းက စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ရှေးဟောင်း ဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါင်း ၁၂၀ ခန့်ရှိနေပါတယ်။ အေဒီ ၈၃၅ မှာ ပျံလွန်တော်မှုခဲ့တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး ကိုဗိုဒါရှီက စလို့ အစဉ်အဆက် ဘုန်းတော်ကြီးတွေ မြုပ်နှံခဲ့ရာ အိုကူနိုအင် သင်္ချိုင်းဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ရှေးအကျဆုံး နဲ့ […]
အဆီများပေမယ့် ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိစေတဲ့ အစားအစာ (၅) မျိုး
အဆီများပေမယ့် ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိစေတဲ့ အစားအစာ (၅) မျိုး အစားအစာတွေကို အဆီများတယ်ဆိုပြီး ရှောင်စားနေတာတွေများရှိလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို အရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။ အချို့ အစားအစာတွေက အဆီများသလောက် ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အကျိုးများနေတတ်လို့ပါ။ အဆီများပေမယ့်ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးများတဲ့ စားစရာတွေက ဘာတွေများလဲ………………. ဒီအစားအစာကိုတွေကို အဆီပါဝင်မှုများလို့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်လောက်ဘူးလို့ ထင်ကောင်းထင်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တေ့ာ့ကျန်းမာချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအစားအစာတွေကို စားပေးဖို့ လိုအပ်ပါမယ်နော်။ (၁) ထောပတ်သီး ထောပတ်သီးက အခြားအသီးတွေနဲ့မတူဘဲ အဆီပါဝင်မှုများပါတယ်။ ထောပတ်သီးမှာ အဆီပါဝင်မှုက ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိပြီး အသားတွေမှာပါဝင်နေတဲ့ အဆီပမာဏထက်များနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထောပတ်သီးက ပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်မှုမြင့်မားသလို အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေတာကြောင့် သွေးတွင်းက အကျိုးမပြုကိုလက်စထရောကိုကျဆင်းစေနိုင်တာကြောင့် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေကို ကာကွယ်ဖို့ စားပေးသင့်ပါတယ်။ အကျိုးမပြုကိုလက်စထရောပမာဏကို ကျဆင်းစေနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ (၂) ချိစ် အာဟာရကြွယ်ဝတဲ့ […]